भुसको आगो सरह फैलिएको विज्ञको आशंका, नेपालमा कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा पुग्ने जोखिम – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/भुसको आगो सरह फैलिएको विज्ञको आशंका, नेपालमा कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा पुग्ने जोखिम
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको जोखिम घटाउन लकडाउन घोषणा गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि समुदायमा चिन्ता बढेको छ। शुक्रबारसम्म कोराना संक्रमित ३० जना पुगेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, शुक्रबार थप १४ जनामा संक्रमण देखिएको छ। उदयपुर जिल्लामा १२ र चितवनमा २ गरी १४ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको हो। उदरपुरमा देखिएका सबै पुरुष छन्। मन्त्रालयका अनुसार, उदयपुरमा २० देखि ४० वर्षका पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। व्यक्तिगत गोपनियताका कारण मन्त्रालयले उमेर मात्र खुलाएको छ। संक्रमितमध्ये एक जना बीस र अर्का बाइस र पच्चीस वर्षका छन्। त्यस्तै अर्का छब्बिस र अटठाइस वर्षका ३ जना छन्। २९ वर्षका दुई जना र ३४ वर्षका एक जना छन्। ४० वर्षका पनि एक जना रहेका छन्।
मस्जिदमा रहेका ती व्यक्तिहरू लुकेर बसेको अवस्थामा परीक्षण गरिएको थियो। मंगलबार सुरक्षाकर्मीसहित मस्जिद पुगेको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नाक एवं घाँटीको स्वाब संकलन गरेको थियो। त्यस्तै चितवनमा संक्रमितमध्ये एकजना पुरुष र अर्को महिला भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले अन्नपूर्णलाई बताए। उनीहरूको उमेर २७ र ६३ छ।
बरिष्ठ श्वासप्रश्वास एवं सघन उपचार (आइसीयु) विज्ञ डा. अर्जुन कार्कीले पछिल्लो अवस्थाले कोरोना भाइरसको संक्रमण तेस्रो चरणमा जाने संकेतका रूपमा लिन सकिने बताए। उनले भने, ‘लकडाउनको घोषणा सँगै सरकारले सतर्कताका प्रयत्नहरू नअपनाएको भए धेरै अघि विष्फोट हुन सक्थ्यो। असावधानी र लापरवाहीका कारण नेपालमा पनि विष्फोट हुन सक्छ। कति ठूलो र कतिखेर विष्फोट हुन्छ भन्ने मात्र हो।’
डा. कार्कीले भने, ‘भुसको आगो जस्तो हुने संभावना प्रबल छ। अहिले नै आत्तिहाल्नु पर्दैन। संक्रमण हुने बित्तिकै कोही मर्ने पनि होइन।’ दिनेश गाैतम र भरत खड्काले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छापेका छन् ।
धन कमाउन कोरिया गयका खड्कबहादुरको ला’स पनी नेपाल आउन पाएन ..
कोरोना कोषलाई प्रकाश सपुतद्वारा २ लाख सहयाेग
बढ्यो अमेरिकी डलरसहित अन्य सबै देशको विनिमयदर